Ukuziphatha komama ngokuphathelene nesoka lentombi yakhe
Inkinga yabo bonke abakudala abachazwe kusukela esikhathini esidlule, futhi okuthiwa "obaba nezingane," kubaluleke kakhulu njengalesi sikhathi sethu. Kodwa-ke, akukaze kuphele ukufaneleka, futhi kuzohlala ekugcineni kwegagasi kuze kube yilapho kukhona obaba nezingane kuleli zwe. Lapho izingane zethu zikhula - asifuni ukuphawula lokhu, sizama ukuzibonakalisa ukuthi ukukhula kwabo kuyinto ewubuwula futhi engenangqondo. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi emadodakazini ethu, ngubani owezolo owadlala amadonsa ngokuzidela. Ukuziphatha komama ngokuphathelene nesoka lentombi yakhe kunesihloko esingapheli. Nakuba kunjalo, bonke omama bahlukile futhi basabela ngokungafani neqiniso lokuthi umntwana wabo ulethe umfana othile endlini.
Ukuziphatha komama ngokuphathelene nomfana wendodakazi yakhe ngokuyinhloko kuqondiswa isimo sakhe sengqondo ngokuqondile nendodakazi ngokwayo. Yebo, yebo, ngisho nakule mizwa ebonakalayo efanayo, ebizwa ngokuthi uthando lomama, abantu banemizila yokuziphatha ekhadini lekhadi.
Lapha, khumbula ukuziphatha komama wakho kuwe ngezikhathi ezahlukene zokuphila. Wabonisa kanjani imizwa yakhe ngawe? Ingabe wayekulungele ukwenza noma yini ayifunayo indodakazi yakhe?
Yiqiniso, bambalwa kakhulu abantu abazokusho ngokusobala ukuthi unina unomuntu obandayo futhi ongenamzwelo, ukuthi wafihla konke ukuphila kwakhe ngemuva kwesigqoko somuntu onzima kunomuntu okhungathekile. Nakuba lokhu kwenzeka, futhi akuyona into engavamile, njengoba kuyoba yinto efiselekayo. Kungani lokhu kwenzeka? Izizathu zingaba yinto eningi kakhulu - ukuqala ngokuvimbela kwemvelo, okuvela ekuphileni kwansuku zonke kuhamba kahle ngokuzimela, ukuphela kwezimo ezenza owesifazane abe namandla futhi abe nzima kakhulu. Mhlawumbe lokhu kungenye indlela yokulimala okubonakalayo, kubonakala ngale ndlela ngesimo sengqondo sakhe kubantwana bakhe. Akuyona iphuzu. Into esemqoka - uma uyazi ukuthi umama wakho wesaba impilo yakhe yonke ukuveza imizwa yakhe ebala - lokhu kungathinta isimo sakhe sengqondo ngesoka lakho.
Owesifazane omdala, umama, uzicabangela ukuhlangenwe nakho okuhlakaniphile kokuphila - futhi lokhu kuyiqiniso ngempela. Ngokuqondile, kuyiqiniso ukuthi unamacala amaningi angamsiza ukuba athole lolo lwazi oluyigugu kakhulu. Kodwa kungakhathaliseki ukuthi wayesebenzisa leli thuba - lokhu kungumuntu ngamunye.
Ake sithi umama wakho unenkinga kubantu ngesikhathi sakhe (mhlawumbe ngisho nobaba). Uzoziphatha kanjani uma ufika ekhaya nesoka lakho? Kunezinketho ezimbili eziyinhloko.
Okokuqala kubo: sonke isikhathi ukwazi isoka lakho elisha, umama uziphatha ngokufanele. Mhlawumbe yena uyamomotheka ngokuzama ukuzama ukumisa umhlangano ojabulisayo. Uyamnika indebe yetiyi ngegama lakhe lokungena ngemvume. Kodwa asisekho. Emehlweni akhe, uzokwazi ngisho nokufunda imizamo eyenziwa ngumama wakho ukuze "angabikho izinhlamvu." Kodwa uma insizwa yakho ivala umnyango - kufanele ulalele "okuningi" okuphathelene nomuntu okhethiweyo. Uma umama wakho ethanda ukukhiqiza, uzozwa ngokuqinisekile ukuthi "bonke bafuna amantombazane kuphela emantombazaneni" nokuthi "unomusa kakhulu ukugcina ubuqotho kuwe - ngicabanga, futhi manje waya kumakhelwane wakhe". Kulesi simo, kungcono uhlale upholile, futhi ungenzi isikhalazo. Zama ngobumnene umama wakho ukuthi isoka lakho ngumuntu omuhle. Kuyoba kuhle uma umnika isibonelo sezinto ezimbalwa ezimangalisayo ezibonisa isoka lakho njengomuntu othanda futhi ozikhathalelayo. Hlela ukuhlaziywa kwamanzi "ukuhlolwa kwezindiza" akudingekile - okokuqala, kusukela kulokhu imizwa yakhe eqondene nesoka lakho ngeke ishintshe. Futhi, okwesibili, ungumama wakho, uyakhathazeka ngawe futhi akafuni ukuthi usemncane (futhi iminyaka yezingane kubazali bayo ihlale ilula) ayizange iphumelele enkingeni. Lokhu akusho ukuthi umama wakho kufanele athole ukungalaleli okuphelele, ngoba kungamcasula. Kodwa ukumphonsa ebusweni bombhalo wokuthi uyiphutha, akudingekile. Phakathi neminyaka yokuphila ndawonye kwadingeka uthole lezo zingcingo zomphefumulo womama, lapho ungadlala khona ngaphandle kokwesaba ukulimaza. Mbonise ukuthi okuhlangenwe nakho kwakhe kuyize. Bonisa ukuthi uyakhathalela ngamazwi akhe. Zama ukugwema izingxabano - futhi, mhlawumbe, esikhathini esizayo uzophatha isoka likayihlo ngokuthembeka kakhulu.
Enye indlela yokuthuthukisa ukuxhumana kwakho nomama wakho kuqala ukuhlangabezana nentuthuko enobudlova nokungajabulisi kwezenzakalo. Akuyona imfihlo ukuthi phakathi kwabesilisa nabesifazane kukhona okuthiwa abaqashi abafuna ukubeka imithetho yabo futhi abesabi ukuguqula imibono yomndeni wonke. Abantu abanjalo banokungalingani, abazi ukuthi baziphathe kanjani futhi bakhetha ukuveza konke ebusweni babo abacabanga. Futhi uma kwezinye izimo kungcono, ngakho-ke ngaphambi kokuba uholele kumama womfana, kufanele ucabange ngokucophelela.
Ingabe uhambisana nalokho okushiwo ngumuntu ohloniphekile? Uma kunjalo, ngeke kudingeke ulungiselele inhlabathi isikhathi eside. Mhlawumbe uma ubona indoda enhle egqoke ne-chic roses edlala ngokuzikhandla ngemoto, umama wakho uyobe eseqhakazile futhi angasho lutho ngokumelene naye. Kodwa lokhu kwenzeka ngokungajwayelekile - akekho ozama ukujabulisa ukuthanda komama uma kuziwa ngemizwa. Ngakho-ke, ngaphambi kokuba uhlele umuntu obaziyo, qalisa umkhankaso wokuqedela kokubili umama nomfana ngomhlangano obuthakathaka kakhulu.
Umama kufanele akhulume ngakhethiwe ukuthi uzovuma noma ngabe yikuphi. Phela, akayena isoka lakhe. Futhi ukwazi noma yiziphi izici ezimbi zomlingiswa womfana akudingekile. Uzoyithola lokho ayekulele ngaphandle. Kodwa lo mfana udinga ukulungiselela iqiniso lokuthi ngaphesheya komngcele wendlu yakho angalindela imizwelo, futhi akuyona imnandi. Memeze umzila othize wokuziphatha, lapho kuzokwazi ukugwema izingxabano. Kodwa yenza ngokucophelela: akudingeki ukuba uzilungiselele ngaphambi komunye nomunye. Ngakho-ke, tshela i-knight mayelana nokuthi hlobo luni lwesilwane umama wakho angase abe, awudingi - ngokuzumayo ukwesaba futhi ushintshe ingqondo yakho? Ekugcineni, uma isimo sinzima kakhulu, ungakwazi ukukhawulela ukukhulumisana kwabo, noma ngisho nokunciphisa ukuzula ngokususa wonke amaphoyinti e-intersection.
Kodwa kukhona namantombazane anjalo angasho ngokuphepha ukuthi banenhlanhla nonina. Cha, angisho ukuthi labo omama abanomlingani oyinkimbinkimbi bangenangqondo. Kodwa kusukela ekuboneni komfana, kuhle kakhulu lapho, lapho uhlonishwa khona ngokungabikho, futhi ungaboni isizathu sezimoto.
Uma ube nobuhlobo obunokwethenjelwa nobungane nomama wakho kusukela ebuntwaneni - kuhle! Uma usuvele wabelane nakho okuhlangenwe nakho kwakhe ngabafana esikoleni futhi wathola ukusekelwa kanye nosizo kuphela kuye - ungacabanga ukuthi awunakho ukukhathazeka ngakho. Ngokuvamile omama abangenawo abafana bathola amadodana endodeni yabo ekhethiwe. Futhi-ke lo mfana "akazulisi" kusukela ekunakekeleni njalo nokunakekelwa ngumama wakho. Ezimweni ezinjalo, babe nobuhlobo obufudumele, ngezinye izikhathi baze babangele umhawu! Kodwa lokhu kufanele kukujabulise!
Kodwa uma izimo ezichazwe ngenhla zihambisana nomngcele ophakathi komama nendodakazi yendodakazi, kukhona isimo sengqondo sokungathathi hlangothi, esivame ukwamukelwa abantu. Umama wakho ngeke nje akwazi ukuveza imicabango yakhe mayelana nomakhethi wakho, uzokwamukela ukubonakala kwakhe njengento yangempela futhi uyomphatha kahle, njengomngane. Kungenzeka ukuthi ngeke uyithande - kodwa kungcono kakhulu kunokuthi uma uhlala ekhaya uhlaselwa othandekayo.
Futhi ngokujwayelekile, singasho ukuthi ngezindlela eziningi ukuziphatha komama nesimo sakhe sengqondo kumuntu kuncike kuwe. Ngokuqondile, kusuka endleleni ohambisa ngayo ulwazi lwakhe ngaye, luhlobo luni lwesithombe oluzokwenza kusengaphambili ekhanda lakhe. Kodwa uyazi umama wakho, uyazi ukuthi wayekufunani njalo - ngakho uma wenza konke ngokunembile nangokwesekhono, ubuhlobo phakathi komama nomfana buzokhula ngendlela evamile. Mhlawumbe ngaphandle kothando olukhethekile, kodwa ngaphandle kobutha - kodwa ubutha phakathi kwabantu ababili abalulekile nabaseduze akulokothi kuholele kunoma yini enhle. Awufuni ukulahlekelwa yibo bobabili, akunjalo?
Indlela yokuqeda intombazane esencane esezingeni eliphansi
Ukubuyisa, ama-blondes, ama-brunettes - abathanda?
Kanye ndawonye efulethini elifanayo, kanjani ukuba khona?
Ingabe kufanelekile ukuba ngowokuqala ukuthatha isinyathelo?
Indlela yokulondoloza othandekayo kusuka ezinkingeni eziphansi
Ushaywe inkukhu ye-kefir namazambane
Ubulili obubonakalayo: kuwufanele?
I-chocolate, izakhiwo - eziwusizo noma eziyingozi
Bathandekayo, obanjwe yi-Inthanethi
Izincomo ezingu-20 zokulahlekelwa kwesisindo
Phrinta "i-goose-paw" - umkhuba wenkathi yasentwasahlobo-2017
Ukudla ekudleni kwezingane
Umshado kaFyodor Bondarchuk noPaulina Andreeva ngeke kwenzeke okwamanje
Izindlala zamakhosikazi ezengqondo
Ukuthandana nabantu abacebile
Izimpawu kanye nokudla okunempilo ku-urolithiasis
Iyini iholide lesonto ngo-Okthoba 14, 2016? Izimpawu, imithandazo, sihalalisela. Yini engakwazi futhi engenzeki ekuvikelweni kweNdodana Engcwele?
Indlela ukuhlobisa igumbi elincane?
U-Anna Sedokova no-Anatoly Tsoy bashadile, isithombe
Sibheka esibhakabhakeni silinde ushintsho